Ị ga na-eri nri ndị trolls | Apg29
Ị ga na-eri nri ndị trolls
Trolls chọrọ igbochi ndị mmadụ si na-azọpụta otú Ya mere ị ga-mgbe na-eri nri ha.
Ya mere, e nwere ihe burukwa n'azụ àgwà ha. Ya mere na-emeso m na mgbe kwuru nke ndị m chee bụ anwansi. M na-enye ha otú ọ dịghị nri.
Gịnị bụ a "anwansi"?
A troll na internet bụ a na naanị ihe onye chọrọ imebi ma na-atụle gbajiri ihe na-aza ajụjụ. Ị nwere ike ghara ime na ndị mmadụ nwere ndị dị otú ahụ na nzube.
Mgbe m malitere na blog Apg29 otú gbalịrị ụfọdụ Ndị Kraịst ndị a trolls, ma mgbe a ezie na ha abụghị. Nke a bụ goblin nzube, na-ndị mmadụ na oge na gwụ ha ka ha ejedebe na-enye elu.
oge Onye Ohi
Trolls bụ a oge ohi, ha chọrọ ịmaja na kwụsị ọrụ anyị. Ya mere, e nwere ihe burukwa n'azụ àgwà ha. Ya mere na-emeso m na mgbe kwuru nke ndị m chee bụ anwansi. M na-enye ha otú ọ dịghị nri.
Nke a bụ goblin nzube, na-ndị mmadụ na oge na gwụ ha ka ha ejedebe na-enye elu.
Nwere ike na-arụ ụka
Ọ na-emekarị na-arụ ụka na onye nwere a troll omume n'ihi nzube na-adịghị ike na otutu mmadu kwenyere na-enweghị obi nkoropụ nke onye troll na-arụ ụka megide.
Na-emekarị m deletar dị otú ahụ kwuru mgbe m na-achọpụta ha n'ihi na ọ bụghị kwuru ga zụọ ndị ọzọ ka na mkparita uka ga-enwekwa ọṅụ. Na ahụkebe ọnọdụ, m nwere tọhapụrụ site dị otú ahụ kwuru ịhụ ebe n'ụgbụgbọ ọ si, na track nke N'ezie, mgbe niile si.
A troll atụ
Otu onye dị otú atụ bụ ụfọdụ kwuru banyere isiokwu bụ "Lee, ana m eme ihe ọhụrụ" na m dere maka New Year. M ga-deletat mbụ comment ozugbo ma ọ họọrọ na-agaghị eme otú ahụ. N'ihi ya, ọ mepụtara dị ka ọ bụ omenala bụ mgbe na-enye trolls mmanụ ụgbọala.
Comments derailed zuru isiokwu nke isiokwu ya mere na ọ bụghị ozi bịarutere. Nke a bụ goblin nzube, ibibi isiokwu ozi ọtụtụ na-abaghị uru na-ekwu. M ka na-ekwu na-eguzo na-egosi otú crazy dị ka nke a nwere ike ịbụ ma ọ bụrụ na ị na-achụ "ke nwa osisi" ozugbo. Ị ga-mgbe na-eri nri ndị trolls.
The atụ nke kwuru na na isiokwu bụ dị ka egwu dị ka ya mgbe ụfọdụ nwere ike ịbụ. Ma m ga-enye gị otu ihe atụ: M wee email site na a onye-azọrọ na ha a Christian na dị ka mpako ahuwo Nnam elu ya dị ukwuu ihe ọmụma nke Bible. Kpọmkwem otú onye a dere, sị:
"M na-adịghị natara a ala site APG29 na afọ. Ka Jehova, bú Chineke nke Israel ime Småland na niile yiri Kraịst mmụọ ọjọọ n'ebe ahụ."
N'ezie, m na-aza mail dị ka ọ bụ kpam kpam na-abaghị uru. M wee dị nnọọ nwetara ọbụna ihe e-Gburu na otú ahụ ka m furu efu oge na mgbalị a onye na-anaghị nwere a uche na-agbanwe.
M mụtara n'isi m ịde blọgụ na m ga-weghara m oge dị otú ahụ ozi ịntanetị na-ekwu. Ị ga na-eri nri ndị trolls! Kama, ị ga-ahapụ ụdị ihe nke na trolls emecha na-agụụ ka ha we ghọta na ha kwesịrị ichegharị ka Jizọs Kraịst na-azọpụta!
Nzube nke Apg29 bụ inye ndị ozioma nke Jizọs Kraịst dị ka mmadụ nke mere na ha ga-enwe ike inweta ya na-azọpụta. Ọ dịghị ihe nwere ike ịkwụsị nke a. Trolls chọrọ igbochi ndị mmadụ si na-azọpụta otú Ya mere ị ga-mgbe na-eri nri ha.
Ma ọ bụ ka m ga-aza ozi ịntanetị ma ọ bụ ihe si na ndị mmadụ nwere ihe ịma aka na nsogbu. Ha na-adịghị na-achọ azịza ha n'ihi na ha nwere ezi obi ajụjụ, ma naanị chọrọ ịjụ. Zaa ndị dị otú ahụ ozi ịntanetị ma ọ bụ kwuru, ị ga-aka nri onye na ajụjụ, na mgbe ọzọ na mgbe ọzọ ... Ọ na-eri nri ndị trolls!
Unu na-eri nri ndị trolls
9 ịrịba ama na ị zutere na ihe internet troll